Safidy novelina mahafinaritra
Fanamarihana tantara foronina mahafinaritra
Boky JK Rowling 3 tsara indrindra
Raha te haharaka ny farany avy amin'ny J, k ianao. Rowling, ho hitanao hatrany hatrany amin'ny vanim-potoana miorina amin'ny isa avo indrindra avy amin'ny mpamaky ETO. Ankoatra ny fampiasana solon'anarana toa mampiady hevitra toa an'i Robert Galbraith na koa ny fanafohezana malaza indrindra JK Rowling, ity mpanoratra anglisy ity ...
Boky tsara indrindra 3 nataon'i David Foster Wallace
Na dia olo-malaza aza izy tany Etazonia, ny fahatongavan'ny asan'i David Foster Wallace tany Espana dia karazana fankatoavana an-tsary ny angano. Satria i David dia nijaly tamin'ny fahaketrahana izay nanenjika azy hatramin'ny fahazazany ka hatramin'ny andro farany niainany ...
Ny natioran'ny afovoany-tany, nataon'i Tolkien
Raha ny tontolon'ny fitantarana noforonin'i JRR Tolkien dia niafara tamin'ny fandosirana an'io andalana mifanindran-dàlana io ny nofinofy, avy amin'ny fandalinana ireo toerana an-tsary an-tsipiriany ary tena niaina tokoa hahatratra ireo toerana azo tsapain-tanana. Ny réalité dia manana singa mifototra amin'ny lohahevitra izay efa nivoahany hatramin'ny ela ...
Ireo boky fanta-daza 5 tsara indrindra
Fantasy no karazana literatiora ifankahalan'ny fahazazana sy ny fahamatorana na eo aza ny zava-drehetra. Ny valisoa dia ny fahafinaretana mandrakariva an'io paradisa onenana mandritra ny fahazazany io ary azo averina indray noho ny mahafinaritra rehefa mihantona ao an-damosintsika ny taona. Noho izany ny tsara indrindra ...
Ny fahaterahan'ny maherifo, nataon'i Jin Yong
Ny fampitahana zavatra amin'ny zavatra voasoratra eo amin'izao tontolo izao amin'ny Tolkien dia toa fahafoizan-tena. Noho izany, ny kendrena an'i Jin Yong ho mpiara-miasa sinoa an'ny injeniera britanika dia toa fitaovana marketing tsy manaja sy mahery vaika kokoa. Mandra-pahitanao ny tratry ny Yong izay na dia misarika kokoa mankany ...
Ny Ghost sy Ramatoa Muir, nataon'i RA Dick
Raha raiki-pitia amin'ny zombie i Alaska ary nampahafantatra azy tamin'ny ray aman-dreniny azy, maninona ary Ramatoa Muir no tsy hanao firaisana amin'ny matoatoa amina trano tsy misy mponina? Ny zava-drehetra dia resaka fotoana sy endrika. Miandry anao hitondra anao any amin'ny ...
Boky Lewis Carroll 3 tsara indrindra
Eo anelanelan'ny sanganasa toa ny The Little Prince nosoratan'i Antoine de Saint Exupéry sy The Neverending Story nataon'i Michael Ende, dia hahitana ilay zava-niainan'i Alice ao Wonderland io. Famakiana tena mety ho an'ny ankizy fa tsy dia tanora loatra. Miasa mameno nofinofy sy soatoavina maha-olombelona tsy hita isa. Ao amin'ny…